Bruno Fernandes oo u jawaabay Klopp kahor kulanka ay Liverpool ku booqanayaan garoonka Anfield – Gool FM
(Manchester) 16 Jan 2021. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa carabka ku adkeeyay in dhalinta rigoorada aysan aheyn wax fudud.
Dhinaca kale laacibka reer Portugal ee Bruno Fernandes ayaa tilmaamay in hadalada Jurgen Klopp aysan waxba aheyn laakiin ay yihiin isku day lagu cadaadinayo garsoorayaasha.
Jurgen Klopp ayaa toddobaadyo kahor sheegay:
“Manchester United waxay heshay labadii sano ee ugu dambeysay rigoorayaal ka badan marka loo eego rigoorayaasha la ii dhigay shantii sano iyo barkii ee aan halkan ku qaatay.”
Taageerayaasha kubadda cagta ayaa sugaya isbuuca 19-aad ee horyaalka Premier League, maadaama ay wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Manchester United bari oo Axad ah, waxaana si weyn loogu go’aamin doonaa kulankan tartanka loogu jiro hanashada horyaalnimada ee xilli ciyaareedkan.
Haddaba Bruno Fernandes ayaa kahor ciyaarta bari ka dhici doonta garoonka Anfield wuxuu u jawaabay tababare Jurgen Klopp, wuxuuna yiri:
“Hadalka Klopp? Diirada ma saaro waxa uu sheegayo, waxaan heysanaa ciyaartoy dheereeya ee dhanka weerarka, Martial tusaale ahaan waa laacib aad ugu wanaagsan ka hor tagida qof iyo qof, Rashford wuxuu leeyahay lugo dhaqso badan oo uu kubadda kaga qaadan karo daafac kasta.”
“Markii aan la joogay Sporting Lisbon, labada koox, Porto iyo Benfica, waxay ka hadlayeen laadadka rigoorada, waxyaabahaasna waxaa loola jeedaa in xoogaa cadaadis la saaro garsooraha ciyaarta ka hor.”
“Waa inaad ka shaqeysaa inaad dhaliso laadadka rigoorada, waa inaad diirada saartaa oo aad qabataa shaqadaada.” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Bruno Fernandes.